सुन्दरी सुड्डीको माया जालमा पर्दा १७ लाखा स्वाहा – eSidhakura
काठमाडाैंको काभ्रेस्थलीबाट अचम्मकी महिला पक्राउ
फार्म हाउसमा कैयौ रात सलमानले ज्याकलिन संग बिताएको खुलासा, सबै हद पार गरेको फोटाहरु धेरै महिनापछि यसरी बाहिरियो
को’रोनाका कारण स्कुल बन्द भएपछि ठूलो संख्यामा स्कुले बालिकाहरु ग’र्भवती
भारत–पाकिस्तान विभाजनका बेला छुट्टिएका दाजुभाईको जब ७४ वर्षपछि पुनर्मिलन भयो…
अग्रवाल परिवारका नौ जना सदस्यसहित फरार भएपछि चार बैंकको ८० करोड डुब्यो
घरमा पालेको कुकुरले खेलौना सम्झेर टो’क्दा २ हप्ताका बालकको मृ’त्यु
गायक यम बरालले दोस्रो विवाह गरेकी गीता को हु्न् ?
Breaking : त्रिशुली नदीमा गाडी ख’स्यो, ७ जना घा’इते
को-भि’डका बि’रामीको उपचारका लागि चिनियाँ जडीबुटी औ’षधिको सफल परीक्षण !
मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा विमानस्थलबाट पक्राउ परेका क्यासिनो सञ्चालकले तिरे १३ करोड राजश्व
समयमा हाजिर नहुने ७३२ सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिस
गाउँको यस्तो नाम जुन लेख्न भन्न नै ला’जमर्दो, इन्टरनेटमा यो नाम सर्च गरे आइडी नै हुन्छ ब्ल’क
२०७९ सालमा दशैको टिका असोज १९ गते, कात्तिक १० गते भाइटीका
सर्लाहीमा बस दु’र्घटना हुँदा, १७ जना घा’इते
नेपालमा आएर चो’री गर्ने सात भा’रतीय महिला चितवनबाट पक्राउ
मुख्य पृष्ठसमाचारसुन्दरी सुड्डीको माया जालमा पर्दा १७ लाखा स्वाहा
सुन्दरी सुड्डीको माया जालमा पर्दा १७ लाखा स्वाहा
३ महिना अघि प्रकाशित
श्याम मगर (नाम परिवर्तन) नेपाल प्रहरीका नायव निरीक्षक (सई) हुन् । प्राविधिक प्रहरी भएका कारण उनी अन्य प्रहरीजस्ता चलाख छैनन् । मुद्दा मामिलासँग सरोकार नराख्ने तिनै सई यतिबेला एउटी युवतीको जा’लमा फस्दा ठुलो मा’नसिक तनावमा रुमलिएका छन् ।
काठमाडौँमै परिवारसँग बसेर आफ्नो काम गरिरहेका श्यामको भेट ओखलढुंंगाको सुनकोशी गाउँपालिका घर बताउने दीपा थापा (परिवर्तित नाम) सँग भयो । सुरुको भेटमा दीपाले आफूलाई सम्पन्न परिवारकी इ’ज्जतदार महिलाका रूपमा चिनाइन् । आफ्नै साथीमार्फत् चिनजान भएका कारण श्यामले ती महिला ख’राब होलिन् भन्ने कल्पनै गरेनन् र भेटघाट तथा सम्पर्क निरन्तर अगाडि बढाइरहे ।
तर, त्यही चिनजान श्यामका लागि अहिले पासो बनेको छ । इ’ज्जतदार परिवारकी महिला भनिएकी दीपा आखिरमा ह’नी ट्रयापमा पारेर पैसा लुट्ने पेसेवर महिला भएको श्यामले त्यतिबेला मात्रै थाहा पाए, जतिबेला उनले करिब २१ लाख रुपैयाँ दीपालाई दिइसकेका थिए ।
अन्तिममा आफ्नो असली अनुहार देखाएकी दीपाले के’स बाहिर नल्याउने भए २५ लाखको डिमाण्ड गरिन् र अन्तिममा १७ लाखमा कुरा मिल्यो ।अ’न्तरङ्ग सम्बन्धको फोटो र भिडियो डिलिट गर्ने शर्तसहित श्यामले १७ लाख त दिए, तर पनि दीपाले श्यामको पिछा गर्न भने छाडिनन् । बरु श्यामको परिवारलाई नै उल्टै ध’म्काउँदै थप रकम माग गर्न थालिन् ।
दुईबीचको सम्बन्धबारे श्यामको परिवारलाई भन्न थालिन् र ब,’लात्कारको मुद्दा लगाइदिने ध’म्की दिन थालिन् । सोमबार रातोपाटीले दीपाको ह’नी ट्रयापको धन्दाबारे समाचार प्रकाशन गरेपछि भने प्रहरी नायव निरीक्षक श्यामले आफ्नो पी’डाबारे बताएका छन् । उनले आफू कसरी पी’डित बने र पेसेवर महिलाको जालमा कसरी परेँ भन्नेबारे बेलिबिस्तार लगाएका छन् ।
महिलासँगको चिनजान=नेपाल प्रहरीमा कार्यरत श्यामको भेट प्रहरीमै कार्यरत एकजना अधिकृतमार्फत् दीपासँग भयो । साथीले दीपा राम्रो परिवारकी मान्छे भएको बताएका थिए । पहिलोपटक कफी खाएर भेटघाट गरेका श्याम र दीपा पछि पनि पटक–पटक भेटघाट गर्न थाले । फोन र फेसबुकको म्यासेन्जरमा पटक–पटक कुराकानी हुन थाल्यो ।
दीपाले आफूसँग केही पैसा रहेको र चाहिएमा चलाउनसमेत दिने कुरा श्यामलाई बताइन् ।आफूले कहिलेकाहीँ मिटर ब्याजमा पनि पैसा चलाउन दिने गरेको र त्यसबाटै राम्रै पैसा कमाइ हुने गरेको समेत दीपाले श्यामलाई बताइन् । कुराकानीकै क्रममा एक दिन दीपाले श्यामसँग केही दिनका लागि भन्दै ८० हजार रुपैयाँ मागिन् ।
सम्पन्न परिवारकी महिला ठानेर श्यामले पैसा दिए । करिब १ महिनापछि दीपाले ८० हजारको केही ब्याजसहित श्यामलाई पैसा फिर्ता गरिन् ।यसैगरी दीपाले बेलाबेलामा श्यामसँग पैसा लिँदै केही दिनमा फिर्ता समेत गर्दै गरिन् । श्याम र दीपाको लेनदेन चल्दै गयो । यहीबीचमा उनीहरुबीच मायाप्रेमको कुरासमेत हुन थाल्यो ।
दीपा श्रीमानसँग डिभोर्स गरेर ५ वर्षकी छोरीसँग कपनमा बस्दै आएकी थिइन् । श्याम भने श्रीमती तथा बालबच्चासहित परिवारसँगै बस्दै आएका थिए ।एक दिन दीपाले श्यामलाई खाना खान भन्दै आफ्नै फ्ल्याटमा बोलाइन् । सुरुमा श्यामले फ्ल्याटमा जान अस्वीकार गरे । तर, दीपाले जिद्दी गर्दै मेरो हातले पकाएको खुवाउँछु भनेपछि श्याम दीपाको फ्ल्याटमा पुगे ।
तर, खाना खाने ब’हाना बनाएर कोठामा बोलाएकी दीपाले सोही दिन श्यामसँग यौ,’नसम्बन्ध राखिन् । श्यामले प्रो’टेक्सन (क’ण्डम) को प्रयोग गरौं भन्दा दीपाले आफूले संगिनी सुई (तीन महिने डि’पो प्रोभेरा) लगाइरहेका कारण चिन्ता गर्नु नपर्ने बताइन् त्यसपछि पनि बेलाबेलामा श्याम र दीपाबीच यौ’नसम्बन्ध हुन थाल्यो र आर्थिक लेनदेन पनि चलिरह्यो ।
दीपाले गत वर्षको चैत महिनातिर जग्गा किन्न केही पैसा नपुगेको भन्दै श्यामसँग १५ लाख रुपैयाँ मागिन् । भक्तपुरमा रहेको जग्गा बेचेर अर्को जग्गा किन्ने भन्दै केही दिनका लागि पैसा मागिन् । श्यामले पनि सँगै कार्यरत अन्य प्रहरी कर्मचारी र सञ्चयकोषबाट समेत सापटी लिएर दीपालाई एकैपटक १५ लाख दिए ।
यतिबेलासम्म दीपालाई उनले दिएको रकम २१ लाख पुगिसकेको थियो । पछि पैसा माग्दा माग्दा बल्ल ६ लाख फिर्ता दिइन् । तर, बाँकी १५ लाख दिने छाँटकाँट देखिएन । सुरुमा पैसा लिने समयमा मगर थरका एक व्यक्तिको नामबाट का’टिएको ३० लाखको चेक पनि श्यामलाई दिइएको थियो ।
जब श्यामले पटक–पटक पैसा माग्न थाले, त्यसपछि दीपाले आफू ग’र्भवती भएको भन्दै ब्ल्या’कमेल गर्न थालिन् । आफू ग’र्भवती भएका कारण विवाह गर्न वा थप पैसा दिन भन्न थालिन् । चेक बाउन्समा कारबाही अगाडि बढाउन खोजेपछि दीपाले चेक बाउन्सको केस गरे ब,’लात्कारको केस हाल्ने ध’म्की दिइन् ।
बरु पहिले लगेको १५ लाख बाहेक पनि थप १० लाख रुपैयाँ माग्न थालिन् । त्यसपछि बल्ल श्यामले आफू पासोमा परिसकेको पत्तो पाए ।ब,’लात्कारको मुद्दा नै लगाउने र त्यसका लागि आफूले फोटो र भिडियोसमेत खिचेको भन्दै देखाउन थालिन् । श्याम दीपाकै कोठामा म’दिरामा ल’ठ्ठ परेको समयमा दीपाले नि’योजितरुपमा फोटो र भिडियो खिचेर राखेकी रहिछिन् ।
त्यसपछि श्याम बरु केस मिलाउने भन्दै छलफलमा बसे ।अन्त्यमा पहिले दिएको ३० लाखको चेक फिर्ता गर्ने र १५ लाख नलिने अनि थप २ लाख गरी कुल १७ लाख दीपालाई बुझाउने सहमति बन्यो । अनि श्यामले थप २ लाख रुपैयाँ दिए र दीपा आफैले ग,’र्भपतन गराउने अनि त्यसको क्षतिपूर्तिबापत १७ लाख रुपैयाँ दिने कागज बन्यो ।
कागजमा दीपाले खिचेको फोटो तथा भिडियो डिलिट गर्ने, अब आइन्दा कुनै सम्पर्क नगर्ने, कहीँ कतै उजुर बाजुर नगर्ने, कानुनी उपचारमा नजाने र ग,’र्भपतन गराएबापत एकमुष्ठरुपमा १७ लाख लिने सहमति बन्यो । र, त्यही सहमति अनुसार श्यामले दीपालाई थप २ लाख नगदसहित १७ लाख रुपैयाँ दिए ।
आफ्नो इ’ज्जत र परिवार बचाउन भन्दै श्यामले पैसा दिए र कागज त गराए । तर, दीपाको ब्ल्या’कमेल अझै सकिएन । बरु श्यामकी श्रीमती र परिवारका सदस्यलाई नै फोन गरेर कान्छी बनेर घरमा आउँछु, ब,’लात्कारको मुद्दा हाल्छु इत्यादि भन्दै ध’म्की दिन थालिन् । कहिले थप पैसा माग्ने त कहिले अनेक खाले धम्की दिन थालिन् ।
तर, प्रहरीमै कार्यरत रहेकाले इज्जतका कारण भन्दै श्याम न कतै उजुर बा’जुर गर्न गए, न त कसैलाई यसबारे बताउन नै सके । प्राप्त मि’लापत्रको कागजमा दीपाको ग’र्भ बसेको र उक्त ग’र्भ तु,’हाउन तथा अब आइन्दा कुनै त’नाव नदिन, उजुर बाजुर नगर्न र सम्पूर्ण सम्बन्ध सि’ध्याउन १७ लाख रुपैयाँ लिएको कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
दीपाको हनी ट्रयापको ध’न्दाबारे जब सोमबार रातोपाटीमा समाचार प्रकाशन भयो, त्यसपछि पीडित श्यामले आफू कसरी ह’नी ट्रयापमा परेँ र कसरी जीवन ब’र्बाद पार्न खोजियो भनी बेलिबिस्तार लगाएका छन् । श्यामले भने, ‘मलाई कसरी फसाइयो भन्ने मैले बताइसकेको छु ।
सुरुमा आफैँ पैसा पनि दिने, अनि पैसा लिने र धेरै पैसा लिइसकेपछि ट्रया’पमा पारेर उल्टै फ’साउने नियत देखियो । मजस्ता व्यक्ति अब न’फसुन् भन्ने चाहन्छु ।’यस्ता व्यक्ति समाजमा हुँदासम्म जोसुकै व्यक्ति सजिलै फ’स्ने बताउँदै उनले भने, ‘मलाई त फ’सेको व्यक्ति म मात्रै होला जस्तो लागेको थियो ।
तर, धेरै व्यक्तिलाई यसरी नै फ’साइएको रहेछ । उनको यस्तो ध’न्दाले धेरैको जीवन ब’र्बाद हुने देखियो । उनको धन्दा तत्काल रोकियोस् भन्ने चाहन्छु ।’मदन ढुङ्गाना / राताेपाटी
सा’बधान, अष्ट्रेलियामा अ,’स्लिल भिडियोमा टाउको जोडेर ब्ल्या’कमेलिङ, भिडियो आफन्तलाई पठाईदिने भन्दै…